The Top Online Marketing Ihe maka Obere na Ọkara-Sized ulo oru | Martech Zone
Emarsys, onye na - eweta igwe ojii ahia ahia nke ulo oru B2C, eweputala nsonaazụ nke ya na mmadu na ntaneti nke ndi oru ntaneti 254 nke edeputara na mmekorita ya na WBR Digital. Key chọpụtara gụnyere SMBs (azụmaahịa ndị nwere ego nke $ 100 nde ma ọ bụ obere) na ụlọ ahịa B2C na-emepe atụmatụ niile maka ihe ịga nke ọma, na-etinyekwu oge na-akwadebe maka oké egwu ezumike ịzụ ahịa oge, na na-anwa iweta teknụzụ dị elu karị, ma soro usoro ọhụụ nke omnichannel site na ijikọ ahụmịhe dijitalụ na ahụmịhe brik, ebe ị na-etinye ego na ikike azụmahịa.
Ndị SMB nke oge a nọ n'ọnọdụ na-adọrọ mmasị - n'agbanyeghị nha ha, ha ka nwere ike irite uru site na azum ahia na teknụzụ yiri nke a na-ebugharị ma jiri ya. Site na omnichannel dijitalụ azum, ụlọ ọrụ ndị dị ka Amazon na-aga n'ihu na-ewelite ụlọ ọrụ gburugburu mma, njide ndị ahịa, na mmezu. Ọ bụghị naanị na SMBs ghọtara nke a, mana na 2016, ha na-achọ imekwu mgbanwe n'ụzọ ha si arụ ọrụ iji kwekọọ na ụkpụrụ omnichannel.
Site na nsonaazụ nyocha ahụ, ndị na-ere ahịa sitere na SMB depụtara ọrụ kachasị n'ịntanetị na mmetụta ha na nnweta na njigide. Email marketing na-eduga ma nnweta na njigide dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ. Ihe ọzọ edepụtara bụ ịchọ nchọta, ọchụchọ akwụ ụgwọ, mgbasa ozi mmekọrịta, ikwughachi azụ, azụmaahịa mgbakwunye, azụmaahịa mkpanaka yana igwe ahịa ịzụ ahịa.
Dabere na nchoputa nke elu mkpọsa SMBs nyochara:
81% nke SMBs ka na-adabere na email dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala maka nnweta ndị ahịa, yana 80% maka njigide ndị ahịa
73% nke ndị na-ere ahịa na-akwado email dị ka ihe kachasị mkpa mmefu ego, yana otu n'ime ise na ogo ya dị ka ihe kacha mkpa itinye ego
SMBs hụrụ uru dị na KPI ndị bụ isi: ọnụego ntụgharị gbanyere site na 72%, ọnụọgụ ego ọnụ ahịa mụbara site na 65%, wee zaghachi ihe ndị ahịa ritere site na 58%.
70% nke SMBs na-amalite atụmatụ ezumike karịa July
54% nke SMBs chọtara ozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụ dị ka usoro azụmaahịa na-aga nke ọma na ndụmọdụ sitere na saịtị wee bụrụ nke abụọ na 47%
Anyị chọpụtara na SMB bụ ndị nwere ọgụgụ isi ma na-azaghachi ngwa ngwa na gburugburu ụlọ ahịa asọmpi taa. Ndị SMB na-achọ nyiwe agile ndị na-eme ngwa ngwa ma dị mfe iji. SMB dị ka ọnụ ala karịa nsị !, Rawlings, na Scrubs & Beyond tụgharịrị na Emarsys iji hụ ROI ozugbo, nọgide na-asọmpi ma jikọọ na ndị ahịa ha n'oge kwesịrị ekwesị na ọwa kwesịrị. Ọzọkwa, SMB na-enye nkọwa banyere omume ndị ahịa iji mepụta ahụmịhe ahịa ahịa na-enweghị ntụpọ maka ndị ahịa n'ofe ngwaọrụ na ọwa. Nke a bụ ihe akaebe na SMBs lekwasịrị anya na njigide ndị ahịa - ihe nnukwu egwuregwu kwesịrị ịtụle. Sean Brady, Onye isi ala America, Emarsys
Maka nyocha a, Emarsys soro WBR Digital soro ndị nyocha ụlọ ọrụ si n'ọtụtụ ụlọ ọrụ B2C na-ahụ maka azụmaahịa ụlọ ahịa ha, e-commerce, ahịa na arụmọrụ ha. A na-eme nyocha mmadụ na ajụjụ ọnụ na saịtị na 2016 ogbako eTail West.
Tags: Mgbakwunye marketingtụnyere ụlọ ahịa ịzụ ahịaemail Marketingdị ọkara ahịaịzụ ahịa azụmaahịa dị n'etitiahịa efunyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọretargetingobere azụmahịaobere ahia ahiaSMBsmb ahịaelekọta mmadụ media